Wigan oo Manchester City ka reebtay koobka FA Cupka+SAWIRRO. – Cayaaraha dunida
Wigan oo Manchester City ka reebtay koobka FA Cupka+SAWIRRO.
Kooxda kubaad cagta Wigan Athletic oo xiligaan ka Cayaareysa Horyaalka heerka 3 aad ayaa Hogaamiye yaasha Horyaalka Premier League ee Manchester City waxa ay ka reebeen koobka FA Cupka dalka England.
Wigan Athletic ayaa 1-0 ku garaacday Manchester City oo uu Roose muran badan dhalisay ka qaatay Cayaaryahankooda Fabian Delph waxaana Garsoorihii kulankaan uu markii hore soo bixiyey Jaale balse waa badalay markii uu Cadaadis kala kulmay Cayaartoyda Wigan.
Manchester City ayaa Goolka laga dhaliyey daqiiqadii 79 aad waxaana ka dhaliyey Cayaaryahanka Will Grigg Goolkaas oo ay ka soo laaban waayeen si kasta oo ay kubada u dheeleen waxaana Taageerayaasha Wigan ay aad ugu dabaal dageen Guusha Taariikhiga ah ee ay ka Gaareen Manchester City.
Macalin Pep Guardiola ayaa la arkayey isaga oo aad uga dagaalamaya Go aankii uu Garsooruhu Roosaha ku siiyey Cayaaryahankiisa Fabian Delph waxaana qaybta hore markii ay dhamaatay rabshad muran laga soo sheegay Tunelka looga baxo garoonka balse weli lama xaqiijin waxa ka dhacay.
Sikastaba waxaa soo af jarantahay Riyadii Macalin Pep Guardiola ee ahayd in uu hal xili Cayaareed kuwada guuleysto afar koob waxaana uu hada xooga saari doonaa Sadex koob oo kale oo u hartay.